2014 65 Kunming National Teaching Equipment Exhibition
Halala !! INKAMPANI YETHU YABAMBA INGXENYE NGO-2014 IMISEBENZI YOKUFUNDA KAZWELONKE YOKUHLANGANISA KA-65, AMAKHASIMENDE AMANINGI AMAKHAYA AMAKHAYA NE-OVERSEA ANESITHAKAZELO KWEZINTO ZETHU ZOKUPHILA, KWEZOKWENZA, KWEZEMPILO, KWEZIMPILO ..
ILianying Import and Export Trade Co., LTD. iwebhusayithi yenkampani isibuyekezo esibanzi
ILianying Import and Export Trade Co, LTD iwebhusayithi ye nkampani isibuyekezo esibanzi
I-Yueqing Lianying Import & Export Ltd.
I-Yueqing Lianying Import & Export Ltd, Co izotholakala ngoMeyi, 2009. Inkampani yethu ukuze isungule futhi ithuthukise ubudlelwane bethu bebhizinisi emhlabeni wonke ukuze ihlobise umhlaba.
Insizakalo yeLianYing Company
Ngokuhlanganiswa kwemakethe yomhlaba, abathengi abaningi baphesheya kwezilwandle bangenisa zonke izinhlobo zemikhiqizo ezivela eChina. Futhi iChina njengezwe elikhulu elikhiqizayo lensimbi yezemfundo yomhlaba, iphuma ekunciphiseni kwezinye izici. Thatha isibonelo, ukusabalalisa kwamabhizinisi akhiqizayo i ...
Ukukhohlisa ukuthanda isikole sezindawo ezihlaselwe ukuzamazama komhlaba ku
Inkampani iLianying iphendula isiphakamiso se-aseismatic esazalwa ngomhlaka 15, Meyi 2008, esenziwe yiChina Educational Instrument & Equipment. Ngemuva kwebhodi labaqondisi, inikela ngezimpahla ze-aseismatic esikoleni sezinhlekelele ku-5.12 WenChuan Earthquake. Inkampani Yezinsiza Zokufunda zeLianying ...
Udinga ukuphishekela kwethu!
Ngabe awazi ngokwanele nge-Instrument Instrument? Ngabe unemibuzo mayelana nekhwalithi ye-Instrument Instrument? Kuthatha ucingo lwakho, kungqongqoza ikhibhodi yakho, oxhumana nathi manje! Sizokusiza ukuthi uthenge Ithuluzi Lokufundisa lelo khwalithi nentengo konke kukodwa. Kuzoba ukuthumela t ...
I-WenZhou LianYing Teaching Instrument Co., LTD Inkampani ingumkhiqizi ophethe umhlaba wonke ohola imishini yokufundisa. Kusukela i-china ingena ku-WTO, futhi ulwazi olusheshayo nolulula lwe-Intanethi, ukuhlala kwemikhiqizo yale nkampani kuzokwandiswa emakethe yomhlaba. Ngaphezu kwalokho, i ...
Isimiso sethu: —Hlanganisa Nemfundo - ——- Nikela Enhlanganweni ——-
Iseva yewebhusayithi yeLianying Teaching Instrument ingene phesheya kwezilwandle.
Iseva yewebhusayithi yeLianying Teaching Instrument ingene phesheya kwezilwandle. Lokhu kuyinto ekufanele ngempela ukuyigubha. Ngokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe benethiwekhi, i-Lianying incike kuyo ukukhonza amakhasimende kangcono. Ngaphezu kwalokho, sinethemba lokuthi singadudula "i-21st Century Functional Classroom" ku-g ...